မောင်မင်းဇော်: Facebook တွင် Status Update ကို Emoticons ဟုခေါ်သည့် ပုံလေးများပါထည့်သွင်းနိုင် တော့မည်
Facebook တွင် Status Update ကို Emoticons ဟုခေါ်သည့် ပုံလေးများပါထည့်သွင်းနိုင် တော့မည်
Facebook ၏ Update Status text box နေရာတွင် How are you doing, What's going on, How's it going? စသည့် စာကြောင်းများအစား၊ What are you doing? ဟု ပြင်ဆင်ခါ မိမိပြုလုပ်နေသည်များကို ပိုမိုသစ်လွင်သည့် feature များဖြင့် အဆင်သင့် ရွေးချယ် update လုပ်နိုင်ရန် Facebook မှစမ်းသပ်နေပါတယ်။ Feeling, Reading, Eating, Listening စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်အလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ခါ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် icon တစ်ခုစီသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင် smile emotion ရုပ်ကလေးများကိုပါ ရွေးချယ် ထည့်သွင်းခါ status update ပြုလုပ်နိုင်ရန် facebook mobile ဝဘ်ဆိုက်မှာ user အချို့နှင့် စမ်းသပ်နေပါတယ်။
icon များ၊ emotion များကို ခေါင်းစဉ်အလိုက် အဆင်သင့် ထည့်သွင်းပေးထားမည်ဖြစ်ရာ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိပြုလုပ်နေသည် ကို ခေါင်းစဉ်အလိုက်ရွေးချယ်ခါ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ စာကြောင်းချည်းသက်သက် status update ပြုလုပ်ရသည်နှင့်စာလျှင် ယခုကဲ့သို့ icon များ၊ emotion များဖြင့် update ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမှာ facebook အသုံးပြုသူများအတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ရာ Facebook feature တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ flower lay at 10:38